Ny maha-zava-dehibe ny fametahana rivotra tsara ny tranonao | Bezzia
Pau Heidemeyer | 01/05/2021 16:00 | Nohavaozina amin'ny 28/04/2021 16:47 | an-trano
manana rivotra tsara ao an-trano no fanalahidy hahatongavana trano mahasalama. Moa ve ianao mirona amin'ny rivotra matetika? Zava-dehibe ny fanaovanao azy tsy tapaka, mba hampihenana ireo singa mandoto.
Ny rivotra tsy ampy ao an-trano dia mety miteraka fitomboan'ny bakteria, fitomboan'ny singa manimba ny fahasalamana, toy ny poti-tsiranoka, mety bakteria azo avy amin'ny volon'ny biby, carbon monoxide, na carbon dioxide.
Raha tsy misy rivotra tsara ny trano dia misy fiatraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny olona izany. Anisan'ireo soritr'aretina hafa, mitombo ny aretin'andoha, ny olana amin'ny taovam-pisefoana na ny olana atory amin'ny torimaso, ohatra ny sasany amin'ireo vokatry ny tsy fampidirana rivotra ao an-trano.
Ao amin'ny trano izay rivotra madio, tsy dia sarotra loatra ny mifehy ny hamandoan'ny trano, ny fanesorana ny farantsakely, ny vovoka, Hofoanana koa ny fofona ratsy ary noho io fitifirana oksizenina vaovao io dia afaka mampitombo ny fivezivezin'ny rivotra ianao.
1 Amin'izany no hahafantaranao raha manana rivotra madio ao an-tranonao ianao
2 Ireo no tombony azo amin'ny fihazonana rivotra tsara ao an-trano
3 Ireo no vokatry ny rivotra mahantra ao an-trano
4 Izany no fomba ahazoanao ny kalitaon'ny rivotra tsara kokoa ao an-trano
5 Fomba entina mametaka rivotra
5.1 Rivotra voajanahary
5.2 Rivotra miditra
5.3 Rivotra miditra an-tery
5.4 Mampiasà mpankafy
5.5 Fetran'ny olona ao an-trano
Amin'izany no hahafantaranao raha manana rivotra madio ao an-tranonao ianao
Zava-dehibe ny fanatanterahana ny fahazarana mandefa ny trano isan'andro, indraindray mino isika fa manao izay rehetra azo atao mba hanana trano salama, na izany aza, mety tsy manao ny zava-drehetra araka ny eritreretintsika isika. Raha te hahalala ianao raha manana rivotra tsara ny tranonao dia ampy ny manaraka torolàlana maromaro.
Ny tranonao dia mety tsy manana rivotra madio, satria indraindray adinontsika ny mampiasa ny mpitrandraka an-dakozia na amin'ny tranga hafa dia tsy manana mpitroka ao an-trano fandroana isika hanampy antsika amin'ny rivotra. Raha tsy manana mpankafy setroka manadio ny rivotra ianao dia tokony manokatra farafaharatsiny indroa isan'andro ny farafaharatsiny.
Etsy ankilany, raha manapa-kevitra ny hifoka ao an-trano ianao, dia afaka mampitombo ny fangoronan'ny poti misy poizina, izay vao mainka miharatsy ny fahasalaman'ny mpiara-monina.
Ireo no tombony azo amin'ny fihazonana rivotra tsara ao an-trano
Tsy maintsy asiana rivotra tsara ny trano ka ny fivezivezy amin'ny rivotra no tsara indrindra. Mba hitrangan'izany dia tsara kokoa ny miditra amin'ny rivotra mandritra ny maraina sy isan'andro. Inona koa, andramo ny hisian'ny fantson-drano ao an-tranonaoRaha azonao atao, mamorona drafitra amin'ny alàlan'ny fanokafana ny windows amin'ny lafiny roa.
Amin'ny alàlan'ny rivotra fotsiny 10 minitra isan'andro dia hahazoanao tombony lehibe kokoa ny tranonao, toy ireo voalaza etsy ambany.
Mihena ny tsy mahazaka.
La oxygenation avy amin'ny rivotra sy ny fanesorana gazy karbonika.
fitsipi-pifehezana ny hamandoana.
Hanafoana ianao ny fofona ratsy ary rivotra iampangana azy.
Ho azonao izany miala sasatra tsara kokoa satria ny rivotra dia ho rivotra sy madio kokoa.
Ireo no vokatry ny rivotra mahantra ao an-trano
Ao an-trano dia tsy maintsy arahi-maso tsy tapaka ny rivotra mba hisorohana ny rivotra tsy miaina ary mijanona ao anatiny foana. Ny fampiononana sy ny fiadanan'ireo mpiara-monina dia miankina amin'ny fananana rivotra vaovao sy vaovao isan'andro.
Ny etona noforonina rehefa mahandro sakafo, rehefa mandro, raha mampiasa hafanana ampiarahina amin'ny rivotra madio isika, dia mety hiteraka tsy fahampian'ny oksizena kely, nefa tsy miteraka fahasimban'ny fahasalamana izany.
Ity fampiononana ho an'ireo izay mipetraka ao an-trano ity dia tsy maintsy miaritra noho izany antony izany, rivotra tsy maintsy atao tsy tapaka ary isan'andro isan'andro. Tsy manana trano misy rivotra madio tsara, dia mifandraika amin'ny fihenjanana sy ny toetran'ny taovam-pisefoana sasany.
Izany no fomba ahazoanao ny kalitaon'ny rivotra tsara kokoa ao an-trano
Tsy maintsy manavaka lafin-javatra lehibe iray isika, satria amin'ny fotoanan'ny ririnina dia azo ampiasaina tsy tapaka ny rafi-panafana ary maina be ny tontolo iainana.
Izy io dia azo averina amin'ny alàlan'ny alàlan'ny alàlan'ny fanamainana sasany. ary manintona ny teknikan'ny rivotra voajanahary amin'ny hazo fijaliana, izay efa noresahintsika teo aloha.
Ho an'ny trano hiasana amin'ny rivotra madio ihany koa amin'ny volana fahavaratra, ny tolo-kevitra dia ny hifehezana ny fampiasana fitaovana elektrika, sorohinao ny jiro miteraka hafanana be, manolora fanaka vita amin'ny hazo mafy ary apetraho ireo zavamaniry mamela hanasaraka ny hafanana.
Fomba entina mametaka rivotra
Manaraka izany dia homenay anao lakile vitsivitsy ianao hahafahanao miditra amin'ny rivotra ny tranonao amin'ny teknika telo samihafa azonao ampiharina anio.
Ilaina ny manavao ny rivotra amin'ny alàlan'ny fanokafana ny varavarankely fadio ny fikorontanan'ny rivotra ao an-trano. Vantany vao manokatra ny varavarankely izy io.
Atsofohy ihany koa ny efitrano zava-dehibe ny manala ny hamandoana novokarina tamin'ny alina tamin'ny fofon'aina, afaka miditra 30 minitra farafaharatsiny ianao.
Ity no fomba fanao tsara indrindra amin'ny trano rivotra, izay tokony hataonao dia ny manokatra varavarankely roa amin'ny toerana roa mifanohitra ny trano ka hiteraka onjam-peo anatiny izay manavao oksizenina haingana sy mahomby.
Rivotra miditra an-tery
Izany karazana rivotra tsy mitovy satria:
Notanterahina noho ny singa mekanika.
Afaka manao ny effet chimney ianao mba hiakatra ny rivotra mafana ary hidina ny rivotra mangatsiaka.
fampiasana varavarankely mandeha amin'ny rivotraIreo dia tokony hamela ny fifanakalozana rivotra farafaharatsiny mba hiantohana ny fahasalamana sy ny kalitaon'ny rivotra anaty trano.
Fomba iray hafa handefasana rivotra ny tranonao amin'ny alàlan'ny mpankafy, izay manampy anay hampiely ny rivotra amin'ny fomba tsara kokoa. Mba hahatratrarana ny rivotra tsara indrindra dia azonao atao ireto manaraka ireto:
Apetraho eo akaikin'ny varavarankely misokatra arak'izay azo atao ny mpankafy iray, manondro mankany am-baravarankely. Io dia mamela ny sombintsombiny monina ao an-trano hamindra amin'ny fomba mandaitra.
Aza atoro ny olon-kafa ny mpankafy, fa izany dia mety hahatonga ny rivotra maloto hanatona azy ireo.
Farany, manoro hevitra izahay mampiasa mpankafy valindrihana izay manampy anao hanatsara ny fivezivezin'ny rivotra ao an-trano, tsy maninona na mivoha ny varavarankely na tsia.
Fetran'ny olona ao an-trano
Fomba iray hafa hanosorana ny rivotra any an-tranonao, na hahazoana antoka fa tsy mamerina be loatra ny poti-bakteria sy bakteria be loatra izany, dia ny famerana ny isan'ny olona ao amin'ny toerana iray sy mandritra ny fotoana iray ao an-tranonao. Noho izany, mamporisika anao izahay hanaraka ireto toro lalana ireto:
Fero ny isan'ireo olona mitsidika ny tranonao.
Mivoria amin'ny toerana lehibe sy malalaka indrindra, mba hahafahanao mitazona lavitra araka izay tratra.
Hamarino tsara fa fohy araka izay azo atao ny fitsidihana.
Aorian'ny fitsidihana dia aza hadino ny miditra amin'ny rivotra.
Izany rehetra izany dia hanampy ny kalitaon'ny rivotra ao an-tranonao hijanona ho milamina ary ambonin'izany rehetra izany dia salama. Aza adino ny mametaka rivotra ny tranonao amin'ny maraina farafahakeliny antsasak'adiny mba hahafahanao mifoka rivotra madio.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » an-trano » Ny maha-zava-dehibe ny fampidirana rivotra tsara ao an-trano